Dad aan baraarug saneyn oo hadda hurdada ka kacay | KEYDMEDIA ONLINE
Dad aan baraarug saneyn oo hadda hurdada ka kacay
Falkii shalay ka dhacay xarunta Golaha shacabka, iyo waraaqdii ka soo baxday xaafiiska Maxamed Mursal, ee 15 xildhibaan loogu diiday in ay xarunta Golaha Shacabka galaan waxa ay indha u kala furtay dad badan oo aan hore u baraarugsameyn, sida uu qabo hoggaamiyaha Mucaaradka CCWarsame.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa sheegay in dad aan hore u aaminsaneyn in Farmaajo doonayo inuu boobo doorashada ay shalay xaqiiqsadeen, kadib markii la soo saaaray waraaq 15 xildhibaan looga mamnuucay ka qeyb galka kulamada soo socda ee Golaha Shacabka.
“Dad ayaa markii ay shaley arkeen 15 xildhibaan oo loo diiday in ay xarunta Golaha Shacabka soo galaan, ayaa igu yiri “ wallee hadda ayaan rummeysannay in Farmaajo doorashada uu doonayo ay tahay mid murashaxa la tartamaya uu subaxa doorashada xaruntiisa Beebe ciidan saaranyahay ku hor gooyo, xildhibaannadana ka hor istaago in ay murashaxiinta la kulmaan, ama uu hoolka doorashada ka celiyo”.Ayuu yiri Warsame.
CC Warsme, wuxuu xusay in damaca Farmaajo ee ka wajahan boobka doorashada iyo adeegsiga beebaha ay la micno tahay hurinta colaado sokeeye, wuxuuna sheegay in ay waajib diini ah tahay in laga hor tago fidnada soo socota.
“In afartii sanaba la qabto doorasho qaabkeeda la isla oggolyahay, natiijadeedana lagu qanco, awooddana si nabad ah lagula kala wareego waxey qeyb weyn ka aheyd dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo dowlad dhiska dalka. Laakiin muddo kororsi ama doorasho Beebe lagu boobayo waa hurinta colaad sokeeye. Ilaaheyna wuxuu quraankiisa ku sheegay in laga hortago fidnada dhibkeedu uusan ku ekeen doonin kuwa dulmiga gaysta oo keli ah”. Ayuu yiri hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir.
Kuwa Farmaajo ku hoos jira ee dabka hoos ka afuufaya ayuu u sheegay in ay iyagu ku guban doonaan, isagoo arrintas ka hadlayana wuxuu yiri, “Waxaa hubaal ah kuwo badan oo maanta Farmaajo durbaanka u tumaya in fidnada uu huriyo, dhibkeeda kuwa ugu horgubta ay noqon doonaan”.